बेलायतका युबा नेपाली व्यवसायीले नेपालमा “ई-क्याब”सेवा" शुरु ! - Himalayamail.com
लण्डन । बेलायतमा सफल युवा नेपाली व्यवसायीका रुपमा स्थापित व्यवसायीहरू दिपक श्रेष्ठ,सन्तोश मण्डल,सजनी लामा र रबट बिश्वकर्माले नेपालमा “ई-क्याब” ट्याक्सी सेवा सुरु गर्ने भएकाछन् । दिपक श्रेष्ठ ,सन्तोश मन्डल लगायत बिशेष टिमले शुरु गरेको “ई क्याब नेपालले “ नेपालमा कार्यालय स्थापना गरि व्यापक सेबा दिने तयारी गरेको हो।
ई क्याब एक अनलाइन ट्याक्सी सेवा हो, जसमा डिजिटल QR प्रणालीबाट ट्याक्सी बूक गर्न सकिन्छ । जसमा हाल १५ सय जना भन्दा बढि दक्ष ट्याक्सी चालकहरू आवद्ध रहेको र आवद्धता बढाउने क्रम जारी रहेको श्रेष्ठले बताए ।
जनवरी २१ मा काठमाडौंको ठमेल स्थित चारतारे होटल “एलफ्टमा “ एक भब्य कार्यक्रमका साथ उक्त सेवाको उदघाटन गर्न लागिएको व्यवसायी तथा” ई-क्याब” नेपाल प्रा. लि का अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपाल अभियानलाई समेत सार्थकता दिने उद्देश्यले उक्त सेवा सुरु गर्न लागिएको अर्का सञ्चालक सन्तोस मन्डलले बताए ।उनी हाल कार्यलय सन्चालन र सेवा सुरुवातको निम्ति नेपाल पुगेका छन् भने दिपक श्रेष्ठ पनि नेपाल तर्फ हिडिसकेकाछन् ।
ई-क्याबले जनवरी २०२२ अन्तिम सम्ममा आफुहरुसंग आवद्ध हुन चाहनेहरूसंग पार्टनर्शिप बढाउदै ६०% बनाउने लक्ष राखेकोछ ।यो सेवा बिश्वस्तरिय सेवासुविधाका साथ सुरु गर्न लागिएको भन्दै संचालक श्रेष्ठले नयाँ प्रविधिसंग जोडिदै अघि बढ्ने अभियान रहेको बताए ।
बेलायतमा सञ्चालित “उवर” “बोल्ट”जस्तै अत्याधुनिक सेवा दिने ईक्याबमा यात्रुको सुरक्षाको निम्ति गाडी कहाँ पुग्यो भनेर ट्रयाक गर्न सकिने फिचर राखिएको छ । यूके तथा अन्य देशहरू बाटै बुक गर्न मिल्ने क्याबमा डिजिटल पेमेन्ट, कार्ड समेत प्रयोग गर्न सकिने सुविधाछन ।साथै खल्ती सेवा र नगद भुक्तानी दिन सकिनेछ । क्याबमा सामान छुटेको अवस्थामा समेत सामानको कुनै चिन्ता गर्न नपर्ने गरि सुरक्षा दिईने गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त छ। साधन हुनेहरू आफ्नै साधन लिएर हिँडेपनि नहुनेहरू कष्टसाथ यात्रा गर्छन्। बस, माइक्रो, ट्याम्पो जताततै यात्रुको चापाचाप हुन्छ। बिहान र बेलुका अफिस टाइममा सार्वजजिक सवारीमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ भेट्न पनि हम्मेहम्मे पर्छ। यस्तै समस्याका बीच सुविधा लिने यात्रुले “ई-क्याब” एपमार्फत उपत्यकाको जुनसुकै ठाउँबाट पनि सेवा लिन सक्छन्। एपबाट नजिकको प्रयोगकर्ता चालक खोजी सेवा बुक गर्न सकिन्छ। साथै अरूको लागी पनि क्याब बुक गरी सुरक्षित साथ गन्तब्यमा पुर्याउन सकिन्छ यात्रा बुक गर्ने बेलामै यात्रा शुल्कको जानकारी पाउने हुदा उपभोक्ताहरु भाडा दरमा ठगिनु पर्दैन !
हाल नेपालमा पठाओ, टुटल, ट्याक्सीमाण्डु लगायतले सेवा दिइरहेका छन । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा यी एपहरुसंग पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा सहकार्य गरि अघि बढ्ने ई-क्याबको भनाइ छ ।
एक दशकदेखि एनआरएन अभियानमा सक्रिय श्रेष्ठले यसअघि एनआरएनए यूके ईग्ल्याण्ड राज्य समितिको अध्यक्ष तथा र एनआरएन यूकेको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरि सकेकाछन् । बुद्ध फाउण्डेसन यूकेका संस्थापक देखि हाल सम्म पनि अध्यक्ष नै छन् भने ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका सदस्य समेत रहेका छन्